နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အစီအစဉ် – Global Environmental Institute
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အစီအစဉ်
၂၀၀၁ ခုနှစ်၏ “တံခါးဖွင့်ထွက်ခွာသွားခြင်း စီးပွားရေးမူဝါဒ” နှင့် ခါးပတ်တစ်ကွင်း၊ လမ်းတစ်စင်း ခေါ်ခေတ်သစ်ပိုးလမ်းမစီမံကိန်းဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံသည်ပြည်ပနိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (OFDI) တွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ပြည်ပစီးပွားရေးချဲ့ထွင်မှုသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာတွင် ဘေးအန္တရာယ်များနှင့်သက်ရောက်နိုင်သည်ကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ GEI သည်ဤပြဿနာများနှင့် ပတ်သက်၍ပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အဖြေရှာခြင်းများပြုလုပ်ရန်အဓိကမူဝါဒချမှတ်သူများနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါသည်။
Download the ‘Overseas Investment, Trade and the Environment Program Introduction’
Insights and Updates from the Field - OITE Blog
ကိန်းဂဏန်းအရေအတွက်နှင့်သက်သေအထောက်အထားများကိုအခြေခံသည့်သုတေသန၊ နည်းပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုနှင့် မြေပြင်ရှိလက်တွဲမိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် GEI သည် –
၁။ သုတေသန – ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ငွေကြေးရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ တရုတ်၏စည်းမျဉ်းများကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
၂။ မူဝါဒဆိုင်ရာထောက်ခံအားပေးမှု – သယံဇာတစီမံခန့်ခွဲမှုတိုးမြှင့်ပေးသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာမူဝါဒလမ်းညွှန်များကိုမြှင့်တင်ရန်။
၃။ နှစ်ဦး၊နှစ်ဖက်ပလက်ဖောင်း – စီးပွားရေး၊ အစိုးရနှင့် NGO များပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုယန္တရားများတည်ဆောက်ခြင်း။
၄။ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်း-တရုတ်ကုမ္ပဏီများ၏ ပြည်ပ၌တာ၀န်ယူမှုနှင့်စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများအတွက်စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်း။
– Advocate for green finance and sustainable projects by Chinese investment banks within China and along the One Belt One Road
– Develop and improve sustainable timber trade and legality
– Provide overseas risk mitigation and management training for Chinese CEOs
– Research and advocate for Chinese NGOs to expand their work internationally
– Curtail illegal timber trade by researching, submitting policy recommendations and facilitating high-level bilateral dialogues;
– Channel increased green investment through bamboo asawood replacement and energy efficient technology like waste-heat source power for cement plants;
– Bring renewable energy planning tools to Myanmar through partnership with Center for Climate Strategies and Guangzhou Institute of Energy Conversion-Chinese Academy of Science.
– Conduct research and provide policy recommendations for Chinese enterprises “going global”
– Help Chinese companies with environmental and social safeguard policies and community development plans
– Build multi-stakeholder platforms for environmental and social safeguards, green investment and climate change issues.
– Promote green finance by researching the environmental and social frameworks of China’s EXIM Bank
– Study China’s Coal Divestment strategy
Cameroon, Congo (DRC), Uganda and Mozambique
– Conduct journalist trainings and exchanges to increase media capacity for covering China-Africa timber issues
– Research export and import laws and customs practices related to China-Africa timber trade;
– Study impacts of land-use investments on the forests;
– Research China-Africa bilateral investment treaties;
– Establish and participate in annual China-Africa Forest Governance Learning Platform
Spotlight on “GEI’s Going Global Series”
Our research gives practical advice and policy recommendations that enable government departments, enterprises and civil society organizations to work together. Our “Going Global” Series is one of the most authoritative and honest voices on China’s overseas investment in the Lower Mekong Region.
Learn more about the climate for Chinese investment and important experiences by Chinese firms in Laos, Myanmar, Cambodia and Vietnam by clicking the respective title.